Manatsara ny Fiainana ny Torohevitr’Andriamanitra | Voalazan’ny Baiboly | Tenin’ny Tanana Malagasy (TTM)
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Asamey Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bashkir Bassa (Cameroun) Batak (Toba) Bengali Bicol Boligara Boulou Cebuano Chichewa Chitumbuka Chiyao Chol Cinghalais Danoà Digor Douala Efik Espaniola Estonianina Failandey Fitenim-paritra Alemà Frantsay Fulfulde (Cameroun) Féroïen Galoà Goujrati Grika Groenlandey Guarani Géorgien Hebreo Hiligaynon Hindi Hmong (Fotsy) Holandey Hongroà Iloko Indonezianina Iokrenianina Irlandey Islandey Italianina Japoney Kabyle Kambôdzianina Karen (S'gaw) Kazakh Kekchi Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Konkani (Devanâgarî) Konkani (Romanina) Koreanina Kreôla any Seychelles Kroaty Kurde Kurmanji (Caucase) Kurde Sorani Kwanyama Laosianina Letonianina Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mam Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Mapudungun Marathe Masedonianina Maya Mazahua Mazateky (Huautla) Miskito Mixtèque (Huajuapan) Mizo Mongol Myama Nahuatl (Afovoany) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Navajo Ndonga Ngabere Nias Norvezianina Népali Ossète Otomi (Lohasaha Mezquital) Ourdou Ouzbek Ouzbek (Romanina) Ouïgour (Sirilika) Pangasinan Pendjabi Persianina Poloney Portogey Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Quiché Romanianina Rosianina Rômania (Gresy Atsimo) Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Setswana Shona Slovaky Slovenianina Soedoà Somali Sranan Tongo Swahili Swati Tagalog Tailandey Tajiki Tamoul Tarahumara Tarasque Tatar Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Aostralianina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Espaniola Tenin’ny Tanana Estonianina Tenin’ny Tanana Failandey Tenin’ny Tanana Grika Tenin’ny Tanana Holandey Tenin’ny Tanana Indonezianina Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Japoney Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Koreanina Tenin’ny Tanana Malagasy Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanana Nikaragoanina Tenin’ny Tanana Perovianina Tenin’ny Tanana Poloney Tenin’ny Tanana Portogey Tenin’ny Tanana Rosianina Tenin’ny Tanana Sinoa Tenin’ny Tanana Tseky Tenin’ny Tanana Venezoelianina Tenin’ny Tanan’ny avy any Arzantina Tenin’ny Tanan’ny avy any Cuba Tenin’ny Tanan’ny avy any Ekoatera Tenin’ny Tanan’ny avy any Québec Tenin’ny Tanan’ny avy any Zimbabwe Tigrigna Tiorka Tiv Tlapanèque Tojolabal Totonac Tseky Tsonga Turkmène Tzotzil Télougou Udmurt Urhobo Venda Vietnamianina Waray-Waray Xhosa Yorobà Zapoteky (Andilan-tany) Zapoteky (Lachiguiri) Zoloa tzeltal
Torohevitra Manatsara ny Fiainana
Torohevitra avy amin’Andriamanitra no nangonina ao amin’ny bokin’ny Ohabolana, ary tena tari-dalana amin’ny fiainana andavanandro. I Solomona no nanoratra ny ankamaroany
MPITONDRA hendry ve i Jehovah? Ho hita izany raha mandaitra ny toroheviny, ary mahatonga ny fiainan’ny olona ho tsara kokoa sy hisy dikany kokoa. Ho hitanao hoe mpitondra manao ahoana izy, rehefa mandinika ireo ohabolana an-jatony nampanoratiny an’i Solomona mpanjaka hendry ianao. Saika ny lafiny rehetra amin’ny fiainana no voaresaka ao. Ireto misy ohatra:
Fatokisana an’Andriamanitra. Tena ilaina ny matoky an’i Jehovah, mba hifandraisana tsara aminy. Hoy i Solomona: “Matokia an’i Jehovah amin’ny fonao manontolo, fa aza miantehitra amin’ny fahaizanao. Eritrereto izy amin’izay rehetra ataonao, dia hataony mandeha tsara ny fiainanao.” (Ohabolana 3:5, 6) Mangataka tari-dalana amin’Andriamanitra sy mankatò azy ny olona matoky azy, ka lasa misy dikany ny fiainany. Mampifaly ny fon’i Jehovah izany, sady manampy azy hamaly ny fiampangan’i Satana fahavalony.—Ohabolana 27:11.
Fifandraisana amin’olona. Tena mila ny torohevitr’Andriamanitra momba ny fianakaviana isika ankehitriny. Manoro hevitra ny lehilahy manambady izy, ohatra, hoe: “Mifalia amin’ny vadin’ny fahatanoranao”, izany hoe aza manitsakitsa-bady. (Ohabolana 5:18-20) Manampy ny vehivavy koa ny modely omen’ny vehivavy iray hajain’ny vady aman-janany, voaresaka ao amin’ny Ohabolana. (Ohabolana toko faha-31) Ny ankizy indray asaina mankatò ny ray aman-dreniny. (Ohabolana 6:20) Hita ao amin’ny Ohabolana koa fa tena ilaina ny namana, satria lasa tia tena ny olona mitokantokana. (Ohabolana 18:1) Mety hitaona antsika hanao ny tsara na hanao ratsy anefa ny namantsika, ka mila mahay mifidy namana isika.—Ohabolana 13:20; 17:17.
Fomba fiainan’ny tsirairay. Tena mahasoa ny torohevitry ny Ohabolana hoe tokony hazoto hiasa, hanana toe-po tsara fa tsy fihetseham-po manimba, ary tsy hiboboka toaka. (Ohabolana 6:6; 14:30; 20:1) Misy fampitandremana koa ao hoe mampidi-doza ny hevitr’olombelona, rehefa tsy mifanaraka amin’ny torohevitr’Andriamanitra. (Ohabolana 14:12) Misy fampirisihana koa hoe mila harovana amin’izay mety hanimba azy ny fo, satria “avy ao aminy ny loharanon’aina.”—Ohabolana 4:23.
Misy olona an-tapitrisany eran-tany mahatsapa fa nihatsara ny fiainany, rehefa nanaraka an’ireo torohevitra ireo izy. Tena miaiky izy ireo fa tsara ny manaiky an’i Jehovah ho Mpitondra.
​—Avy ao amin’ny bokin’ny Ohabolana.
Inona no asehon’ny bokin’ny Ohabolana momba an’i Jehovah?
Inona no lazain’ny Ohabolana momba ny fatokisana an’Andriamanitra sy ny fifandraisana amin’olona ary ny fomba fiainan’ny tsirairay?
Inona no azonao atao mba hampisy dikany ny fiainanao sy hahatonga anao ho sambatra? Tsara toerana hamaly izany i Solomona. Nanan-karena be sy tena hendry izy ary nanana fahefana lehibe, ka afaka nandinika raha tena mahasambatra ireo. Nifaly tamin’ny fananany izy, nanambady vehivavy maro tsara tarehy, ary nanao ny fialam-boly tsara indrindra. Nanorina trano lehibe maro izy, ary nandalina asa soratra maro. Hitany anefa fa “zava-poana ny zava-drehetra.” Izao no famaranan-teniny: “Matahora an’Andriamanitra ka tandremo ny didiny, fa izany no adidy tokony hataon’ny olombelona.”—Mpitoriteny 12:8, 13.